Ndeipi mutengo wekugara muVenezuela? - ALinks
Mari inofungidzirwa yekugara muVenezuela i9,000 Bs.S pamwedzi kumunhu mumwechete. Mhuri yevana inokwanisa kupedza 2,500 Bs.S mumwedzi. Iyi ndiyo mari yekugara pasina rendi.
Mari yeVenezuela iVenezuelan Changamire Bolivar, kana kuti VES, kana Bs.S. Gumi veVenezuelan Changamire Bolivars vakatenderedza 2.2 US Dollars kana kutenderedza maEuro maviri. Iyo inosvika zana nemakumi manomwe emadhora ekuIndia kana gumi nemashanu eChinese Yuan.
Mutengo wekurarama chinhu chakakosha zvikuru. Kana tikataura nezveVenezuela saka zvechokwadi, yakachipa pane mutengo wekugara muUSA. Asi zvakadaro, mutengo wekugara muVenezuela uri 11.58% kupfuura mutengo wekugara muIndia. Chinhu chakanakisa nezveVenezuela ndechekuti ine yakachipa peturu mitengo.
Venezuela inyika yekuSouth America ine mashura makuru epasi rose. Inosanganisira kureba kwemvura uye kona kudonha uye gungwa reCaribbean Sea refu kwazvo. Mutengo wekugara muVenezuela unozviisa pasi. Inogona kunge iri nyika inodhura zvakanyanya kana yakachipa pasi rose. Kune maviri epamutemo ekutsinhana uye dema musika mitengo ine mutsauko pakati pavo.
Zvingava nani kuwana mazano kune mumwe munhu anogara munharaunda iyoyo uye anozviziva. Upenyu hweVenezuela hwakashata, kuparwa kwemhosva kuri kuwedzera, uye zvokudya zvinowanika zvishoma.
Mubairo weVenezuela uri pasi pemadhora manomwe pamwedzi. Avhareji muhoro iri pasi pemadhora makumi maviri nemashanu, zvichiita maVenezuel asina zvinhu zvekunze. Zvese izvi imhaka yemacommunist economic policy neindasitiri uye mihoro yakanaka. MuVenezuela, mubhadharo wepamwedzi wega wega uri pasi pemadhora makumi maviri nemashanu, iyo yakaderera kwatiri asi yakasikwa kwavari. Zvakanyanya kuoma kubhadhara mari yako yese uye kutenga zvinodiwa kana uchirenda.
Kana iwe uri foodie, zvizhinji zvezvokudya hazvina mari. Iwe uri mune yakadai se2 $ kuEl Baretto nesobho, chinwiwa, uye dhizeti. Zvakare, madhora gumi pamunhu paresitorendi yakanaka kana uine mashoma ekudya, chikafu chikuru, dhizeti, uye zvinwiwa zvishoma.
Mai, munogona kuraira McDonald's 'yakanyanya kukura burger. Kudyira kunze, sekunge zvimwe zvese muVenezuela, hazvidhure.
Chikafu chinombotinetsa. Inoshanduka vhiki nevhiki, saka hazvisi nyore kuisa mufananidzo pairi. Pa $ 100 mwedzi wega wega, unogona kudya chero chinhu chaunoda.
Chikafu muVenezuela parizvino ndicho chakachipa pasirese. Iyo ine zvese zvekutanga-zvinotengeswa pasi rose zvigadzirwa zvinodhura zvishoma pano pane kumwe kunhu. Iwe unofanirwa kubhadhara mari yakasiyana pane chimwe nechimwe chiitiko.
Pane nzira nhatu dzekutenderera nekuhaya mota kana kuhaya mota munyika. Sezvo peturu isingadhure, mabhazi akafaranuka uye haadhure.
Kombi ndiyo inonyanya kufarirwa yekufambisa mukati memaguta. Michovha inodhura kupfuura zvimwe zvekufambisa, asi ichiri kusvika.
Caracas inozvirumbidza yemazuva ano uye isingadhure metro sisitimu iyo parizvino iri kuwedzerwa (kunyangwe yakabatikana uye ine tsvina!).
Unogona kuwana tikiti rebhaisikopo rinotenderedza 0.5 $ (uye kazhinji kunyange shoma) uye 2 $ yemapopcorn, machokoreti, uye hombe Pepsi.
Mitambo yekunze yakadai sekufamba-famba inowanikwawo muEl vila kuitira kuti uchengetedze mari panhengo yejimu.
Mitambo yemitambo inodhura muVenezuela, asi kwete yevatorwa. Kuve nhengo yejimu kana yekusimbisa muviri inoita madhora manomwe. Rendi inotengwawo, kunyangwe izvi zvichisiyana nenzvimbo.
Imba yakanaka muEl Rosal ine makamuri maviri ekurara, kicheni, washer, uye yekuomesa. Zvakare, nzvimbo yekupaka inogona kuita mari inosvika mazana matatu emadhora pamwedzi.
Ingangove $500 muAltamira, inoyevedza nzvimbo. Imba ye studio inogona kunge yakachipa se $ 1,500 chero kupi zvako.
Ndeipi mari idiki diki inodiwa kuti ugare muVenezuela?
Pasina rendi, mhuri yevana ichashandisa $ 1,937 pamwedzi. Pasina rendi, mari inofungidzirwa yemunhu mumwe chete pamwedzi i$521. Venezuela ine mutengo wakachipa we40 muzana pane weUnited States. Avhareji yerendi muVenezuela yakaderera ne80 muzana pane yeUnited States.
Zvinofadza here kugara muVenezuela?
Asi, Venezuela inzvimbo yakanaka yekugara kwechikamu chikuru, uye vazhinji vekare vanogutsikana ipapo. Hezvino zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti ive nemukurumbira. Iine mamiriro ekunze akasiyana-siyana, uye nzvimbo yairi pamusoro peequator inoita kuti ive nyika inopisa.
MuVenezuela, imbwa inonaka inoita marii?
Vashandisi vanonakidzwa nehot dogs, asi i$5 – $6 imwe neimwe, isingasvikike kune veVenezuela. Vanoita mari inosvika masendi makumi mashanu nemasere pamasitendi ehotdog. Muripo wepamwedzi wega wega wemadhora mashanu muVenezuela, kunyangwe hotdog yemumugwagwa yave yeumbozha kune vakawanda.
Zvinoita here kuti vekunze vatenge kana kutengesa zvivakwa muVenezuela?
Vekune dzimwe nyika vane pasipoti vanogona kutenga nzvimbo yezvinangwa zvebhizinesi nezvimwe. Vekune dzimwe nyika vanokwanisawo kutenga nzvimbo vachishandisa mabhizimusi ekunze kana emuno.
Nei kune vapoteri veVenezuela?
Vazhinji veVenezuelan vakatsvaga hupoteri nekuda kwemamiriro ehupfumi nehupfumi muVenezuela. Vamwe vanhu vanga vachidzoka mumakore apfuura. Asi kushomeka kwemafuta, magetsi, uye mvura yakachena mukudonha kwa2020 kwakonzera mhirizhonga nekubva patsva.
MuUnited States, voruzhinji veVeVenezuela vanogara kupi?
Maodzanyemba Florida, maDoral, neWeston suburbs ane nhamba yepamusoro yeVeVenezuelan muUS. Sekureva kwe 2010 census, nyika dzinotevera dzine vanhu vekuVenezuelan America vakakura. Texas, New York, California, New Jersey, Georgia, uye Virginia.
Sezvinoratidzwa, pazasi ndeimwe yemitengo yemazuva ese yekugara muVenezuela.
Avhareji yemari yeresitorendi
Yepamoyo Meal Budget
Resitorendi 3.50 $
Kudya kweVanhu 2 25.00 $
Kukurumidza kudya Kudya?
Kudya paMcDonald's 4.00 $
Doro reMumba (0.5 ltr draught) 0.98 $
Cappuccino (nguva dzose) 0.83 $
Coke/Pepsi (0.33 ltr bhodhoro) 1.03 $
Mvura (0.33 ltr bhodhoro) 0.69 $
Mukaka (nguva dzose), (1 ltr) 1.35 $
Lofu Yechingwa Chitsva Chichena (500g) 0.90 $
Mazai (nguva dzose) (12) 1.35 $
Mazamu ehuku (1kg) 2.75$
Nyama yemombe (1kg) 2.82$
Maapuro (1kg) 3.87 $
Madomasi (1kg) 1.34 $
Hanyanisi (1kg) 1.26 $
Lettuce (300 magiramu) 1.22 $
Sezvatinoziva tese kuti Veneula ine zvicherwa zvisere zvebiogas uye ndiyo imwe yenyika huru dzinotengesa peturu kunze. Unozoshamisika kuziva kuti nedhora rimwe chete rekuAmerica unogona kuzadza tangi remota yepakati nepakati kanokwana ka720.
Mufananidzo uri pabutiro uri kumwe kuMaracay, Aragua, Venezuela. Mufananidzo na Jorge Salvador on Unsplash
Ndeipi mutengo wekugara muIndia?
Kuronga Rwendo kuenda kuVenezuela, Heino Iyo YeBhajeti Gwaro